Halyeeyga reer Talyaani ee Del Piero oo ka hadlay goolkii cajiibka ahaa uu Saalax xalay ka dhaliyay kooxda Chelsea – Gool FM
Halyeeyga reer Talyaani ee Del Piero oo ka hadlay goolkii cajiibka ahaa uu Saalax xalay ka dhaliyay kooxda Chelsea
Dajiye April 15, 2019
(England) 15 Abriil 2019. Halyeeyga reer Talyaani ee Alessandro Del Piero ayaa ka hadlay goolkii uu xalay Maxamed Saalax kaga dhaliyay kooxda Chelsea kulankii ay ku wada ciyaareen horyaalka Premier League.
44 jirkan horey u soo xirtay maaliyada kooxda Juventus ayaa tilmaamay in goolkii cajiibka ahaa ee Maxamed Saalax uu kaga shubay kooxda Chelsea uusan ahayn mid nasiib ah.
“Maxamed Saalax wuxuu gool cajiib ah ee aan la rumeysan karin ka dhaliyay kooxda Chelsea, kubadda waxay kaga timid booska ugu fiican, wuxuuna si aan caadi ahayn ugu hubsaday shabaqa Blues”.
“Goolka Maxamed Saalax marna laguma tilmaami karo inuu yahay mid nasiib ah, goolashan oo kale nasiib kuma yimaadaan, wuxuu kubadda u tuuray hab ku habboon ee xoog badan, isla markaana aan caadi ahayn”.
Si kastaba Maxamed Saalax ayaa xalay ku hogaamiyay kooxdiisa Liverpool inay guul kaga gaarto Chelsea kulankooda 34-aad ee horyaalka Premier League, kadib markii uu ka dhaliyay gool cajiib ah ee soo jiitay indhaha caalamka.